Hamba uye eLwandle usuka kwiApartment enelanga
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguMartina
Vuka uye kukukhanya kwelanga okuthambileyo okuthontsiza kwiifestile kwaye ukhanyise ingaphakathi elimhlophe elithambileyo kweli khaya. Hamba udlule kwii-accents ze-chic ezifana nezityalo ezishinyeneyo, izinto zeplanga, kunye neethayile ze-mosaic ngelixa unyukela kwi-terrace yangasese eluphahleni.
“Ukukhanya kwelanga emva kwemini kwi-terrace ephahleni ayikwazi ukubethwa. Indawo efanelekileyo yokuphumla kwaye ube nesiselo.”
- Martina, umbuki zindwendwe wakho
Ibhalkhoni, I-Queen bed, Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu
4.99 (iingxelo zokuhlola 100)
Le ndlu ikwindawo ezolileyo kodwa isekuhambo lwemizuzu eli-10 ukusuka kumbindi wesixeko. Yiya elunxwemeni olumenyezelayo olukufutshane uyokuqesha izixhobo kwaye uthathe izifundo ezimnandi. Kwaye ujonge idolophu ephambili apho iivenkile zokutyela ezimnandi kunye neevenkile ezizodwa zilindelwe.
Umgama ukusuka eAirport Brač
imizuzu eyi-321 ngemoto xa indlela ingaxakekanga
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Korčula